ကြောင် ချစ်တယ် ကြောင် ချစ်တယ်နဲ့ ကြောင်သန်းကိုက်ရင် အသက်ပါဆုံးနိုင်တာ သိပါလား…? – Burmese.asia
Homepage / News / ကြောင် ချစ်တယ် ကြောင် ချစ်တယ်နဲ့ ကြောင်သန်းကိုက်ရင် အသက်ပါဆုံးနိုင်တာ သိပါလား…?
ကြောင် ချစ်တယ် ကြောင် ချစ်တယ်နဲ့ ကြောင်သန်းကိုက်ရင် အသက်ပါဆုံးနိုင်တာ သိပါလား…?
၁၆ နှစ်အရွယ် ကျောင်းသူလေး ကြောင်သန်းကိုက်ခံရကာသေဆုံးထိုင်းနိုင်ငံ ဖတ်ချာဘန် စီရင်စုက အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ် ကျောင်းသူလေးတစ်ဦး ကြောင်သန်းကိုက်ခံရရာမှတစ်ဆင့် သွေးအဆိပ်သင့်ပြီး သြဂုတ်လ ၆ ရက် တနင်္လာနေ့က သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။‘ဆူနီဆာ’ လို့ အမည်ရတဲ့ မိန်းကလေးရဲ့ မိသားစုတွေဟာ ကြောင်ချစ်သူတွေဖြစ်ပြီး ကြောင်အတော်များများ အိမ်မှာ မွေးမြူထားပါတယ်။ ‘ဆူနီဆာ’ ဟာ အဲဒီကြောင်တွေထဲက တစ်ကောင်ရဲ့ ကြောင်သန်း ကိုက်ခံရပြီး ကိုယ်ပူခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်ယားယံခြင်း၊ အရိုးအဆစ်ကိုက်ခဲခြင်းနဲ့ တစ်ကိုယ်လုံး ယောင်အမ်းလာခြင်း စတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေ ခံစားခဲ့ရပါတယ်။
ဒါကို ပေါ့ပေါ့လေးပဲထားကာ ဆေးသောက်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်း ကျောင်းတက်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဝေဒနာက သက်သာမလာပဲ ပိုဆိုးလားတဲ့အတွက် မိသားစုက ဆေးရုံပြခဲ့ပါတယ်။ ဆေးရုံမှာလည်း အခြေအနေက ပိုဆိုးလာတဲ့အတွက် အခြားဆေးရုံကြီးတစ်ခုကို လွှဲပြောင်းပြီး ကုသမှုခံယူခဲ့ပေမယ့် သြဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့က ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။အိမ်မှာ ကြောင် ၇ ကောင်ရှိပြီး အခြားသူတွေက သူတို့အိမ်ရှေ့ လာပစ်သွားကြတာမို့ သနားလို့ ကျွေးမွေးရင်းကနေ အိမ်မှာ ကြောင်တွေ များနေရတာစ်ကြောင်း ‘ဆူနီဆာ’ ရဲ့ အဖွားက ပြောပြပါတယ်။
အခုလို မြေးမလေး ‘ဆူနီဆာ’ သေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာတော့ မိသားစုတွေက ကြောင်တွေကို ဆက်မမွေးတော့ပဲ အခြားတစ်နေရာမှာ စွန့်ပစ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်။ခွေးသန်း၊ ကြောင်သန်း တွေဟာ လူတွေမှာ တွယ်ကပ်မနေနိုင်ပေမယ့် သူတို့ကိုက်တာကို ခံရတဲ့အခါမှာ ဓာတ်မတည့်တဲ့ တုံ့ပြန်မှုဝေဒနာတစ်ခုခုကို ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ကြောင်ချစ်သူ၊ ခွေးချစ်သူများလည်း ကြောင်တွေ ခွေးတွေကို သန်းတွေ၊ လှေးတွေမရှိအောင် သန့်ရှင်းရေး ပုံမှန်လုပ်ပေးရင်း သူတို့ကို ချစ်လဲချစ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလဲ ကာကွယ်ဖို့ သတိပေးချင်ပါတယ်
Previous post အောင်လကို အသေထိုးမှာပါလို့သတိပေးကာ ကြုံးဝါးလိုက်တဲ့ ရုရှားဖိုက်တာဘစ်ဒက်ရှ်
Next post ရက်စက်လိုက်ကြတာဗျာ ခင်ဗျားတို့လူတွေမှဟုတ်ကြရဲ့လားမွေးတောင်မွေးခဲ့ပြီးပြီပဲ မလိုချင်တောင်အသက်ရှင်သန်ခွင့်လေးတော့ပေးသင့်ပါတယ်ဗျာ